Grayling vs Hitchens | Zizawa's refuge
Grayling vs Hitchens
Posted by zizawa ⋅ 06/02/2011 ⋅ Leaveacomment
အင်္ဂလန်က နံမယ်ကြီး ဖီလော်ဆော်ဖာ A C Grayling နဲ့ နံမယ်ကြီး ဝေဖန်ရေး ဆရာ Chris Hitchens တို့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ ရန်သူ့ဘက်က အရပ်သားတွေနဲ့ သူတို့နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အဆောက်အဦတွေကို ပစ်မှတ်ထား ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက်တာကို ကျင့်ဝတ် ရှုဒေါင့်ကနေ အငြင်းအခုံ လုပ်ကြတယ်။
A C Grayling ကို လူထု ဦးစိန်ဝင်းက ဗမာ စာဖတ် ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖူးတယ်။ နှစ်ယောက် စလုံးရဲ့ သက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုက အငြင်းအခုံ အတတ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မှ ဖြစ်နိုင်မဲ့ သက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုမျိုး။ Grayling က ဖီလော်ဆော်ဖာ၊ နောက်တယောက်ကတော့ နိုင်ငံရေး မျက်မှောက်ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေ ဝေဖန် သုံးသပ်သူ ဖြစ်တယ်။
Intellectual ဟဲဗီးဝိတ်တွေရဲ့ အငြင်းအခုံတွေကို အရသာခံ နားထောင်ချင်သူတွေအတွက် လင့်ပေးလိုက်တယ်။ နှစ်နာရီ နီးနီးကြာတာမို့ ဒါမျိုး စိတ်မဝင်စားသူတွေ အတွက်တော့ ပျင်းစရာ ကောင်းချင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ (Justahealth warning! :D)
The entire debate is packed with incisive arguments. And I think I am persuaded to agree with professor Grayling. He madeabrilliant comparison between 911 attack and carpet-bombing, and here is an excerpt from his argument.
… if you think it isabad thing that anybody should try to kill and terrorize civilians, non-combatants in order to coerce their governments or to do harm to their polity by carrying out the attack of that kind, then you gotta be consistent, and you gotta recognize that on that particular point, there is incomparability between deliberately and systematically attacking civilians and cities as we did in Japan and Germany during WW2. –A C Grayling-
« ရောက်ခဲ့ပေါ့ အမ်စတာဒမ်
ဒေါ်လာခေတ် ကုန်တော့မှာလား »